Netanya TVU na-ekwupụta Kit nke Onye Mmepụta Software Na-ewu ewu maka TVU Ya Na-ewu ewu N'ebe ọ bụla App | NAB Gosi News | 2021 NAB Gosi Onye Mmekọ na Onye Mmepụta nke NAB Show LIVE. Mgbasa Injinia Mgbasa Ozi
Home » News » Netwọk TVU na-ekwupụta Kit nke Onye Mmepụta Software Na-ewu ewu maka TVU Na-ewu ewu Ebe ọ bụla
Netwọk TVU na-ekwupụta Kit nke Onye Mmepụta Software Na-ewu ewu maka TVU Na-ewu ewu Ebe ọ bụla
MOUNTAIN VERE, CA - March 24, 2021 - TVU Networks, ahịa na teknụzụ nke onye ndu na igwe ojii na IP na-eweta vidiyo vidiyo, taa kwupụtara TVU Anywhere SDK, ihe ngwanrọ mmepe sọftụwia n'efu maka TVU N'ebe ọ bụla na-ebi IP vidiyo gụgharia ngwa. Site na TVU ọhụụ Ebe ọ bụla SDK, ndị mmepe nwere ike ịgbakwunye ntụkwasị obi vidiyo na-atụkwasị obi, nke dị elu, obere ịdị latency na ngwa iOS ma ọ bụ gam akporo, nke na-eme ka ọ dị mfe maka ndị nta akụkọ, ndị na-ekiri ya, na ndị na-akwado ya itinye vidiyo vidiyo maka mmemme.
TVU N'ebe ọ bụla SDK dị mma maka ndị mmepe metụtara ngwa okike maka ndị mgbasa ozi, ụlọ ọrụ akụkọ, ndị egwuregwu, ma ọ bụ nzukọ ọ bụla metụtara mmepụta vidiyo dị ndụ. Ọ na-enye ha ohere iwekota TVU N’ebe ọ bụla n’ime ngwa dị ugbu a, nke na-agbakwunye usoro ndụ gụgharia siri ike dakọtara na TVU Networks gburugburu ebe obibi gụnyere ndị na-anabata TVU, Grid Grid, Onye na-emepụta TVU, na ndị ọzọ.
Dịka ọmụmaatụ, onye mgbasa ozi nwere ike ịgbakwunye TVU N'ebe ọ bụla n'ime ngwa ha, na-enye ndị na-ede akụkọ na ndị ọrụ ha ohere ịkọ vidiyo vidiyo nke na-agbasa akụkọ ozugbo site n'ọhịa na-enweghị igwefoto dị iche ma ọ bụ ngwa mgbakwunye. Ndị na-ekiri nwekwara ike ịghọ ụmụ amaala ndị nta akụkọ ma jee ozi dị ka mgbatị nke ike mkpesa nke ọdụ ahụ, na-eji ngwa ahụ iji nye eserese pụrụ iche nke akụkọ ma ọ bụ mmemme na-agbasa mpaghara. E wezụga ozi ọma na-agbasa ozi, ikike ịme egwuregwu nwere ike ịhapụ ndị na-eguzosi ike n'ihe ka ha bụrụ akụkụ nke omume ahụ site na ịnyefe eserese ndụ site na ngwa ha site n'ụlọ, nnọkọ mmekọrịta, ma ọ bụ n'ime ebe mgbakọ maka ngosi akara ụbọchị egwuregwu ma ọ bụ mmemme ndụ.
Live transmissions na-eri nri kpọmkwem n'ime usoro ndụ TVU, na-enye ndakọrịta na TVU Grid maka nkesa vidiyo IP. Ọzọkwa, ihe nkiri a na-ebi ndụ kwekọrọ na ngwaike ngwanrọ TVU, dịka TVU Receivers na TVU Servers, yana igwe ojii sitere na igwe ojii gụnyere TVU Producer, TVU MediaMind, na TVU Transcriber.
"Kemgbe mmalite nke ọrịa COVID-19, ojiji nke TVU Anywhere ngwa anyị iji kesaa vidio dị ndụ site na ndị na-eweta n'ụlọ na ndị na-ede akụkọ naanị gbawara," ka Matt McEwen, osote onye isi nke njikwa ngwaahịa kọwara. “Ojiji nke imepụta ihe ga - aga n’ihu na - eto, vidiyo vidio bụ akụkụ bụ isi nke usoro ahụ. Ihe ọhụrụ anyị TVU N’ebe ọ bụla SDK na-enye ndị mmepe ụzọ dị mfe ma dịkwa ọnụ ala iji nyere ụlọ ọrụ mgbasa ozi, ndị otu egwuregwu, na ndị ọzọ na-emepụta ọdịnaya mepụtakwu ọdịnaya site na ọtụtụ mmadụ ọsọ ọsọ, nke na-eduga na itinyekwu ndị na-ekiri ihe nkiri. ”
Ọtụtụ puku ndị mgbasa ozi na ndị ọkachamara vidiyo ejirila TVU Ebe ọ bụla iji nye akụkọ dị ndụ site n'ofe obodo ma ọ bụ ebe dịpụrụ adịpụ n'ofe ụwa. Ọ na atụmatụ onye kensinammuo ọrụ interface nakwa dị ka siri ike atụmatụ maka ọkachamara pụta. Site na protocol nke ISU patented IS +, TVU N'ebe ọ bụla na-enye ntụkwasị obi, nnyefe adịghị ala maka mkpuchi ndụ, ọbụlagodi n'ọnọdụ ndị dị oke njọ. Ọ na-akpaghị aka na-ejikọ mkpanaka mkpanaka dị na mkpanaka yana njikọ WiFi iji nye bandwit na njikọ njikọta kachasị.
TVU N'ebe ọ bụla SDK bụ onye kachasị ọhụrụ nke ezinụlọ TVU nke APIs. API ndị gara aga maka TVU MediaMind, TVU Transceiver, TVU Grid, na TVU IS + na-enye ohere ijikọ na gburugburu TVU nke nnweta, mmepụta, transcoding, nchekwa, njikwa, nyocha, na nkesa nkesa. TVU N'ebe ọ bụla SDK, yana ntuziaka zuru ezu, dị ugbu a maka nbudata ozugbo ma ọ bụ na www.tvunetworks.com/tvu-developer/.
Banyere TVU Networks®
TVU Networks bụ nzukọ zuru ụwa ọnụ nwere ihe karịrị ndị ahịa 3,000 na-eji IP ya na igwe ojii na-arụ ọrụ arụmọrụ gafere ọtụtụ ọrụ gụnyere akụkọ, mgbasa ozi ntụrụndụ, egwuregwu, ụlọ ọrụ, nkwanye, ụlọ ofufe na gọọmentị. Site na ojiji nke AI na teknụzụ akpaaka na-arụ ọrụ, TVU na-enyere ndị mgbasa ozi aka ịghọta metadata na arụmọrụ na-arụ ọrụ akụkọ site na ikpo okwu TVU MediaMind maka nnweta ọdịnaya vidiyo dị ndụ, ntinye aha, mmepụta, nkesa na njikwa. Companylọ ọrụ ahụ ebutela ụzọ ịmepụta ngwaọrụ ndị dị mkpa iji gbanwee ma dozie Chain Media Supply. TVU bụ akụkụ dị oke mkpa nke arụmọrụ nke ọtụtụ ụlọ ọrụ mgbasa ozi ndị isi n'ụwa niile ma bụrụ onye mmeri Emmy® Technology na Engineering.
ozi mgbasa ozi video vidio eme egwuregwu tvu video gụgharia nnyefe vidiyo 2021-03-24
Previous: Blackmagic Design Powers PGL's Ngwuregwu Egwuregwu Mba Nile
Osote: Intinor na-agbakwunye igbu oge nkesa onye ọrụ